Tontolo Arabo: Ny Feon’ireo Sembana · Global Voices teny Malagasy
Mpanoratra Ahmed Awadalla Nandika (it) i Gabriele Corbetta, Henri Dumoulin, Raveloaritiana Mamisoa
Voadika ny 20 Jolay 2012 10:44 GMT
Vakio amin'ny teny Deutsch, polski, Magyar, Español, Italiano, Français, English
Nisy ny fanentanana antserasera nalefa vao haingana teo amin'ny tontolo Arabo mba hampahafantatra bebe kokoa ny tolona ataon'ny olona sembana ho fiarovana ny zony. Nanambara i Abdallah AlShalaqi, mpitolona ao Arabia Saodita, sy tompo-kevitra tamin'ny fanentanana fa nandritra ny resadresaka tamin'ny fahitalavitra izay mikendry ny hanaitra ny sain'ny tontolo Arabo mikasika ny zon'ny olona sembana, sy handrava ny fahanginanan'ny fampahalalam-baovao manoloana izany toe-javatra izany ary hamporisika ireo tompon'andraiki-panjakana handray ny andraikitriny.
Iharan'ny fanavakavahana sy ny fanilikilihana ireo olona ireo kanefa efa nitolona ho amin'ny fitovian-jo amin'ny maha-olom-pirenena azy mba ahafahany mampiasa ny fahaiza-manaony manokana. Mampisongadina ny fahafahana (mivezivezy malalaka amin'ny tontolo tiana idirana), ny fitovian-jo eo amin'ny fampianarana, ny asa, ny trano fonenana, sy ny fitsaharan'ny herisetra sy fihantsiana isan-karazana ny fanentanana izay matetika mora mihatra amin'izy ireo.
Twitter no fitaovana voalohany nampiasaina mba handrenesana ny feon'izy ireo. Angatahana ireo mpiserasera mampiasa izany tambazotra sosialy (twiter) izany mba hanaisotra ny sariny ary hanolo izany amin'ny tenifototra hoe #للمعوق_حقوق, na koa hoe “ Manana ny zony ny olona sembana“, mba hanairana ny sain'ny maro amin'izany izany. Nanohana izany fanentanana izany ny mpiserasera marobe avy amin'ny tontolo Arabo.
Safar Al Hogbani, sembana mpilalao basket-ball aminà ekipa iray, nanoratra ity tweet ity:
Ao anatin'ny fiaraha-monina ny olona sembana. Adidy maha-olona sy eo amin'ny firenena no miraharaha ny seha-piainan'izy ireo. Fitarafana ny fandrosoana maha-olona sy ny haavon-tsivilizasionan'ny fiaraha-monina ny fanajana ny lalàna.
Nitantara ny niainany manokana i Sumaya Al Ghamadi :
Nanana zo hokarakaraina aho fa tsy fijery onena velively raha nandeha tany Alemaina, eto kosa mifanohitra amin'izany, mijery ahy tahaka ny ontsa dia ontsa fa tsy misy miraharaha izany.
manameloka ny fiarah-monina i @jessica_2090 :
Tsy ny olona no sembana fa ny fiaraha-monina no manao izay tsy hahatombana azy.
Manampy i Abo Khaled :
Manan-jò ny olona manana fahasembanana, indrindra ny mba hivelomany. Tsy hoe sembana dia hiankin-doha amin'ny hafa.
Mitaky ny zony [sembana] ara-drariny ihany koa ny mpisera Twitter hafa. Toy izany ny Dr ott.ssa Sohair Abdel Hafeez izay nilaza fa vehivavy, renina zazalahy dimy izay tsy mandre ny roa, dia nahavita ny fianarany teny amin'ny anjerimanontolo. Nandritra ny nahavoafidy ny filoha Mohamed Morsi, nametraka izao fitakiana manaraka izao tamin'ny ekipany ravehivavy .
Ao anatin'ny fiaraha-monina ejipsianina tsara ny olona manana fahasembanana sy ny fianakaviany. Manan-jò ireo, ary anatin'izany ny fijoroana maha-izy ny tena. Tokony hijery izany zo izany tsy misy fanavahana ny filoha.
Mpiserasera fanta-daza i Mohamed Abu Taleb, olona tsy mahita mampianatra ny fampiasaina solosaina amin'olona manana olana eo amin'ny fahitana. Toy izao ny nosoratany :
Na dia mahaleo tena aza aho dia mbola voakombona ato amin'ny tranoko ary tsy manaiky izany toe-javatra izany.
Nahafehy ny lalan-tsarotry ny fiainako mahaleo tena aho noho ny fampaherezan'ny fianakaviako, indrindra fa ny raiko.
Noho izay traikefa vitako izay, tsy ekeko intsony ny sakana, noho ny fahasarotana na tsy fahafaha-manao mihitsy, tsy hahatratra ny fanambiko sy ny nofinofiko avy amin'ny herin'ny tenako.
Randa Aboeldahab, bilaogera hafa no miaina amin'ny fahasembanana rehefa tapaka ny ranjony iray,toy izao no nosoratany mikasika ny zava-iainany manoloana ny herisetra mihatra amin'ny sembana:
Ny herisetra hafahafa indrindra nahazo ahy dia natao-nà mpamily fiara : ampiasain'ny tompony ho fitaovana hanaovana herisetra io fiara io. Izaho ihany angamba no iharan'izany toe-javatra izany. Nitranga ny lozam-pifamoivoizana raha niampita arabe aho nanoloana fiara mijanona. Nalefan'ilay mpamily ny fiara dia nandòna ahy, niteny anankampo aho hoe :” Tsy fanahy iniana angamba”. Nifindra tany aorian'ny fiara aho fa mbola nodonin'ilay olona ihany aho sady mihiakiaka manompa izy.
Nosimbaiko tamin'ny tehiko ny jiro iray. Nompainy indray aho, novakiako ny jiro faharoa. Nolazainiy ho adala aho, novelesiko ny varavarana iray an'ny fiara dia lasa aho…
Hita amin'ny aterineto ireo fijoroana vavolombelona marobe mitovy izany tranga izany, indrindra ao amin'ny kaonty I Am Not Disabled (tsy sembana aho) sy ao amin'ny tranokala Voice of The Disabled ( Ny Feon'ny Sembana), sy ireo sehatra fampahalalam-baovao ampiasaina hampitàna ny feon'ireo sembana.
Nandika (it) i Gabriele Corbetta